Nzukọ Ulo Okpukpe nke Apathetic Agnostic - WRSP
APNHEIC AGNOSTIC (UCTAA) MGBE
1965 Mgbe ọ na-aga Royal College College nke Canada, John Tyrrell bu ụzọ okwu ndị a “Amaghị m na achọghị m ịma” na 'Apathetic Agnosticism' iji kọwaa nkwenkwe okpukpe ya.
1996 John Tyrrell tọrọ ntọala Nzukọ Ezumezu nke Mba Nile nke Apathetic Agnostic (UCTAA) na okike nke otu mkpụrụ akwụkwọ dị mkpirikpi na saịtị ya. N'oge ahụ, webpage gụnyere naanị isiokwu atọ nke okwukwe na njedebe.
1996 Mgbe afọ a gasịrị, peeji nke ahụ gbasaa iji tinye akụkụ nke nkwenye na nkọwa banyere Isiokwu nke Okwukwe. E tinyekwara ibe ya na weebụsaịtị ya.
1997 Otu nhọrọ nchịkọta ụka nwere dị.
1998 E guzobere ndị isi ndị nlekọta ndị ụkọchukwu, na ogo na nhazi ka a na-enye n'aka University University nke Nescience.
2000 E nwere mmụba na mmasị na usoro Apathetic Agnosticism, na ndị òtù na-achọ ịmalite ịrụ ọrụ karị. Nke a mere ka ọtụtụ ntinye ọhụrụ, tinyere saịtị ndị Clergy Resource, nke ozi nzuzo maka ndị òtù, na ịmepụta mpaghara mpaghara. Tyrrell zụrụ ngalaba aha uctaa.org na ApatheticAgnostic.com.
2003 (Jenụwarị) E tinyere iwu na United States na United States. Njikọ ndị ahụ mechara hapụ.
A maghị banyere ndụ John Tyrrell, bụ onye guzobere òtù ndị na-adịghị ahụ anya na Agosis. A zụlitere ya n'ezinụlọ Anglican dị na Ontario. O tinyere ya na College Royal Army nke Canada ebe ọ natara BA na Economics na Politics ma mechara nweta MBA site na Queen's College. Site na 1963-1994, Tyrrell jere ọrụ dịka Njikọ Akụrụngwa n'Òtù Ndị agha Canada (Tyrell 2012).
Ọ na-ewe Tyrrell ọtụtụ afọ iji nweta echiche nke enweghị agnosticism. Mgbe ọ tụlechara ọtụtụ okpukpe, ọ bịara ghọta na ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ha kwusiri okwu nke ọ bụla dị adị. O siri ike na "enweghi ike idozi okwu ahụ n'eziokwu, nkwenkwe nkwenkwe dum daa - n'agbanyeghị ụdị okpukpe" ("History" nd).
Mgbe John Tyrrell bu ụzọ webata UCTAA, ọ bụ nanị nkwupụta dị mma nke nkwenkwe onwe ya ma ọ nweghị
ọchịchọ nke ya na-apụ. Taa, e mere atụmatụ na UCTAA nwere ihe karịrị ndị otu 10,000 na ihe karịrị mba iri anọ, mana enweghị ndekọ ndị otu ziri ezi dị ("History" nd). Tyrrell na-ahụ maka nnukwu nke mmezi weebụsaịtị. Ya onwe ya na-aza ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ ya, ọ na-etinyezi na saịtị ahụ na ngalaba a na-akpọ "Jụọ Onyeisi Ndị Bishọp."
Okwu ahụ bụ Apatheism (Portmanteau nke Apathy na Theism ma ọ bụ enweghị mmasị na atheism) bụ onye American na-ede akwụkwọ na onye mmegide, Jonathon Rauch. Ọ na-akọwa na ọ bụ "nkwụsịtụ iji lekọta ihe niile gbasara okpukpe nke aka ya, ọbụnakwa na-esighi ike ịghara ịma banyere ndị ọzọ" (Rauch 2003). Rauch na - ahụ ịrị elu nke apatheism na America dị ka ihe mmepe ọdịbendị dị ukwuu ma na - eme ka àgwà ahụ dị jụụ na ọtụtụ ndị America nakweere okpukpe. N'ụzọ dị iche na Apathetic Agnosticism, ọtụtụ ndị ọkà mmụta okpukpe na-ekwere na chi ma na-aga ọrụ okpukpe. Ọ bụ ezie na ọtụtụ agnostics bụ ndị na-eme ihe ike, ọ bụghị ndị niile na-ekwu okwu banyere ya bụ ihe ndị na-adịghị mma (Rauch 2003).
Ihe di iche di iche n'etiti agnosticism na apathetic agnosticism bu na obu ezie na ha abua choro na ha amaghi na chi di, agnostics nwere ike ichota okwu a di oke nkpa. Ọgba aghara na-enweghị atụ na-emesi ike na aghara aghara bụ njedebe zuru oke n'ọchịchọ maka nkwenkwe okpukpe. Site n'ịghọta na eziokwu kachasị ọnụ bụ ihe a na-apụghị ịkọwapụta, "anyị nwere ike ịtọhapụ onwe anyị n'ọchịchọ na-enweghị mkpụrụ na n'ezie, ọ dịghịzi eche banyere ịza ajụjụ ahụ" (Tyrrell nd).
Ndi Universal Church Triumphant of the Apathetic Agnostic (UCTAA) nwere “akwukwo okwukwe” ato ato.
1. Ọdịdị nke Onye Kasị Elu adịghị ama ama ma bụrụ nke a na-apụghị ịmata ama.
2. Ọ bụrụ na Onye Kasị Elu dị, mgbe ahụ, ọhụụ ahụ yiri ka ọ bụ enweghị mmasị na ihe ndị dị na mbara igwe anyị.
3. Anyị enweghị mmasị na ịdị adị ma ọ bụ adịghị adị nke Onye Kasị Elu ("Okwukwe" 2006).
Mkpokọta nke nzukọ ahụ na-ekwu na "Ọ bụrụ na ị ghọtara ma nakwere Ụkpụrụ Okwukwe ndị a ... mgbe ahụ, ị ​​bụ Onye na-enweghị atụ, ma ọ bụ na ị ga-etinye aka na Chọọchị" ("Faith" 2006).
Nkwenye na Akwụkwọ Okwukwe bụ nanị ihe a chọrọ iji soro Chọọchị na-akpakọrịta, ọbụna nke ahụ bụ iwu na-adịghị mma. Enwere
nkọwa na weebụsaịtị, ma a na-agba ndị na-eso ụzọ ume ịkọwa isiokwu dịka ha chere na ọ dị mma. Dị ka onye nchoputa si kwuo, isiokwu mbụ dabeere na nkwenkwe na okwukwe abụghị otu ihe ọmụma dị omimi, ya mere, ọ dịghị ihe àmà maka ma ọ bụ megide ịdị adị nke Onye Kasị Elu. Nanị otu ọnọdụ dị n'okwu ahụ bụ na anyị amaghị. Isiokwu nke abụọ na-atụ aro na ọ bụrụ na Onye Kasị Elu dị, ọ bụ enweghị mmasị na ịdị adị anyị. Nke a na-apụta na nghọta na ihe niile dị na Eluigwe na Ala bụ ihe a na-akọwa n'agbanyeghị enweghị adị ma ọ bụ adịghị adị nke Onye Kasị Elu. Isiokwu nke ikpeazụ na-ekwusi ike na, dabere na nke abụọ mbụ, ọ dịghị ihe kpatara nsogbu onwe ya na iche echiche banyere ịdị adị nke Onye Kasị Elu.
Ebumnuche nke ụka dị ka ndị a:
1. "Anyị nwere ike ibu karịa Scientology ... ma ọ bụrụ na anyị abụghị ndị na-enweghị obi ụtọ."
2. "Ịgbasaa echiche nke Apathetic Agnosticism dị ka o kwere mee. N'ịbụ onye na-enweghị mmasị na ajụjụ nke ịdị adị nke Onye Kasị Elu apụtaghị ịbụ onye enweghị mmasị n'echiche ahụ. "
Ebumnuche ndị a na-egosipụta na ụka, mgbe ha na-enwe nkwenkwe na ihe mgbaru ọsọ siri ike, adịghị ewere onwe ya oke ("Nhọrọ").
Enwere obere ememme metụtara UCTAA. Ihe omume a na-anụ ọkụ n'obi nke Ụlọ Nzukọ Agụmakwụkwọ na-eme na Thursday na mmiri ozuzo gafee ụwa. Ma ọ bụghị ya, ihe bụ isi e jikọtara ya na chọọchị bụ ikesa nke ihe omuma nke metụtara agnosticism apathetic.
N'ibu ụzọ ebumpụta ụwa nke 1996, John Tyrrell bụ otu onye so n'òtù Ngwá Agha Ụwa Nile nke
Apathetic Agnostic. Na 1997, a na-enye nhọrọ ndị otu, na 1998, e guzobere ndị nlekọta ndị ụkọchukwu. Nke a bụ ndị ọkachamara na-enweghị isi n'ihi na ọ bụghị iwu na ndị ụkọchukwu dị ala na-enye ndị isi ha iwu ("Òtù").
Ka ọ dị ugbu a, Onyeisi Chọọchị bụ John Tyrrell, onye guzobere ya. E nwere ọtụtụ nhọrọ ndị a na-enye, gụnyere:
Njikọ aka: naanị ịnakwere Akwụkwọ Okwukwe, ma ị na-etinye aka ma ọ bụ na ị ga-abụ onye nọ n'ọgbakọ.
Ndi otu ndi choro: a na - enye ndi mmadu ohere itinye aka na Choat Agnostic Cholesterol Choir nke na - eme kwa uhuruchi onwa ozo.
Otu n'ime ọgbakọ: na-enye Degree Bachelor si Mahadum Mba Nile nke Nescience na ịnweta akwụkwọ ozi weebụ. A na-enweta ogo n'ọtụtụ ọzụzụ gụnyere Abathy, Ignorance, Nescience, Studies Agnostic, na Ime Mmụọ-Ime.
Nhazi: nata ọkwa na nchịkwa dịka Minista, pastọ, Rabbi, Oku, ma ọ bụ Oku.
Ọrụ ndị ụkọchukwu e chiri echichi bụ “inye aka mee ka ndị nwere mmasi banyere ụka ahụ na nkuzi ya nye ndị ọzọ” (“Ordination” nd). Nke a nwere ike ịbụ site na itinye njikọ na saịtị UCTAA na ibe weebụ nkeonwe, ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ na-enyo enyo, ma ọ bụ na-eduzi mmemme ọbịbịa. Ndị ozi nwere ike ịhọpụta ndị ụkọchukwu ma duzie mmemme ndị kwesịrị ekwesị, gụnyere mmemme alụm di na nwunye iwu na mpaghara ebe iwu nabatara nhazi ha. Enwekwara ndị ụkọchukwu ahọpụtara ohere ịbanye na Clergy Resource Site nke dinka (Ordination nd).
Dika enweghi ulo akwukwo nso, enwere nchegbu banyere ihe gbasara iwu. Enwere ike ibu ọrụ na John Tyrrell, bụ onye guzobere ya. Ọ bụ ezie na nzukọ ahụ na-akụda ụtụ ego onyinye, ụlọ ọrụ weebụ na-anabata ndụmọdụ gbasara iwu na nnọchite anya site n'aka ndị ọka iwu dị njikere. A nabatara ndụmọdụ a n'ụzọ zuru ezu iji jide nkwenye dị ka okpukpe ka ndị ụkọchukwu a họpụtara ahọpụta nwee ike ịlụ di na nwunye.
UCTAA anaghị arịọ ma ọ bụ kwenye onyinye dị ka iwu n'ozuzu. Onye nchoputa nke ebe nrụọrụ weebụ na-eme ka nzukọ ahụ bụrụ nke n'akpa uwe. Nhazi a, tinyere enweghị mmasị nke ndị na-akwado ya, ekwela ka Chọọchị nọgide na-enwekarị nsogbu ("mkpa" nd)
"Nhọrọ" Chọọchị nke Apathetic Agnostic. Nweta site na http://uctaa.net/ourchurch/a.html.html na 12 April 2013.
"Okwukwe." 1996. Chọọchị nke Apathetic Agnostic. Nweta site na http://uctaa.net/ourchurch/faith.html na 9 April 2013.
"History." Nd Chọọchị nke Apathetic Agnostic. Nweta site na http://uctaa.net/ourchurch/history.html na 12 April 2013.
"Mkpa." Nd Chọọchị nke Apathetic Agnostic. Nweta site na http://uctaa.net/ourchurch/needs.html na 12 April 2013.
"Iwu" nd Chọọchị nke Apathetic Agnostic. Nweta site na http://uctaa.net/join/ordain.html na 14 April 2013
"Òtù" Chọọchị nke Apathetic Agnostic. Nweta site na http://uctaa.net/ourchurch/organization.html na 14 April 2013.
Rauch, Jonathon. 2003. "Ka Ọ Bụrụ: Atọ Na-atọ Ụtọ Maka Ọgwụ Ọjọọ." Atlantic. Nweta site na http://www.jonathanrauch.com/jrauch_articles/apatheism_beyond_religion/ na 13 April 2013.
Tyrrell, John. 2012. "2012 Edition nke Web John Tyrrell." Nweta site na http://www.johntyrrell.com/about.html na 13 April 2013.